Ku kasbado Xirfadaha Shaqada Hodges Direct, Qeyb ka mid ah Jaamacadda Hodges
Categories: Hodges Toosan
Ku soo dhowow HU Direct, Waa Qeyb Degdeg ah oo ka tirsan Jaamacadda Hodges
Jaamacadda Hodges waxay bixisaa shahaadooyin shaqaale lagu hago iyo shahaadooyin baahi looga qabo gobolka iyo wixii ka baxsan. Aagagga waxaa ka mid ah daryeelka caafimaadka, tikniyoolajiyadda, ganacsiga, maareynta, iyo maaliyadda. Ardaydu waxay ku qaadan karaan fasallo kambuyuutar, khadka tooska ah, iyo iyada oo loo sii marayo Fasalladayada Teknoolajiyadda Tignoolojiyadda (TEC), taas oo u oggolaanaysa inay ka soo qayb galaan fasalka meel kasta oo ay joogaan, oo toos ugu nool internetka. Jaamacadda Hodges sidoo kale waxay bixisaa heer sare Barnaamijka shahaadada Ingiriisiga oo ah Luuqad Labaad (ESL).
Laga bilaabo goobta wanaagsan ee Lehigh Acres, HU Direct waxay marin u heli doontaa booska fasalka iyo xafiiska macallinka, ku yaal Lehigh Acres, ee CRC-da Wanaagsan. Fasallo iyo aqoon isweydaarsiyo ayaa lagu qaban karaa bulshada Lehigh Acres maalmaha iyo waqtiyada sida ugu habboon ugu habboon deganayaasha bulshada. Jaamacadda Hodges waxay caan ku tahay ku takhasusida bartayaasha qaangaarka ah, waana taas sababta barnaamijyada badankood loo qabto fiidkii iyo dhammaadka usbuuca xerada, ama khadka tooska ah.
Isbahaysi aan macquul ahayn - Jaamacadda Hodges iyo Warshadaha Wanaagga
Jaleecada hore, waxay umuuqataa Jaamacada Hodges iyo Warshadaha Wanaagga ee Koonfur-galbeed Florida wax badan iskama dhex lahayn. Si kastaba ha noqotee, labada hay'adood oo wada shaqeynaya, waxaan si fiican wax uga qaban karnaa baahiyaha tababarka shaqaalaha ee ka jira gobolkeenna.
Labada niyad wanaag iyo jaamacada Hodges labaduba waxay u shaqeeyaan si adag si loo helo, hadana waxaa jirta wado kale oo taas lagu gaarsiin karo heerka xiga. Wanaaggu wuxuu bixiyaa bilow adag oo loogu talagalay kuwa raadinaya inay bilaabaan ama beddelaan xirfad sababo la xiriira kacdoonkii uu keenay COVID-19. Jaamacadda Hodges waxay soo bandhigtay hindise cusub oo loogu magac daray HU Direct, Waa Qaybta Degdegga ee Jaamacadda Hodges.
Isbahaysigani wuxuu u keenayaa deggeneyaasha fursado tababarro waxbarasho iyo xoog badan, oo ku habboon beeshooda.
Nala soo xiriir maanta wixii faahfaahin dheeraad ah!
HU Toos Ma Tahay Adiga?
Haddii aad xiiseyneyso ballaarinta xirfadahaaga goobta shaqada, markaa HU Direct adiga ayaa iska leh!
Waa Maxay Koorsooyinka Lagu Heli Karo Hodges Direct?
Fasallada waxaa laga heli doonaa habeenno iyo dhammaadka usbuuca Xarumaha Kheyraadka Bulshada ee Lehigh Acres (CRC). Koorsooyinka waxaa ka mid noqon doona:
Naxwaha Ingiriisiga ee Onlineka
Kormeeraha Khadka Koowaad
Xirfad ku Leh Goobta Shaqada
Jidka loo maro Lahaanshaha Guri
Xirfadlayaasha Taageerada Tooska ah
Abaal marinteenna ugu weyn waa aragtidaas muuqaalka rajada iyo kalsoonida cusub iyadoo ay ardaydu helayaan aqoon iyo xirfado cusub oo ka caawin doona iyaga inay ka dhabeeyaan riyadooda. Waa saameyn togan oo horey u sii wadi doonta jiilalka.